Fiakarana sy fianjeran'ny Apple Arcade, tantaran'ny tsy fahombiazana | Vaovao IPhone
Ny fiakarana sy ny fianjeran'ny Apple Arcade, tantaran'ny tsy fahombiazana
Tamin'ny 2 Jona, nankalaza ny volana faharoa nifanesy i Apple Arcade nefa tsy nasiana lalao vaovao tokana tao amin'ny katalaoginy. Zavatra tena manaitra raha mihevitra isika fa ny orinasa Cupertino dia nanangana an'io serivisy io tamin'ny fikasana hanome fahafaham-po ireo mpilalao amin'ny vaovao mampiala voly.
Na izany aza, ity volana faharoa misesy tsy misy lalao ity dia manazava tsara ny raharahan'ny Apple Arcade ao amin'ny katalaogin'ny serivisy an'ny orinasa Cupertino, ao amin'ny Limby tanteraka. Tsy ny chiringuitos rehetra izay natsangan'ny orinasa Cupertino dia tokony hahomby, ary toa manamafy izany fotsiny ny Apple Arcade.
1 Manomboka amin'ny fientanentanana sy ny kipantsona hatramin'ny fahanginana
2 Tsy nanana fitarainana marina mihitsy
3 Ny fananana lehibe an'ny Apple TV
4 Tsy misy andinin-tsoratra na lalao franchise
Manomboka amin'ny fientanentanana sy ny kipantsona hatramin'ny fahanginana
Ny orinasa Cupertino dia nanambara tamin'ny 10 septambra 2019 ny fananganana serivisy fisoratana anarana vaovao, iray amin'ireo izay tian'i Steve Jobs. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny mpandray anjara mavitrika isika anio, Apple Arcade. Ny fandefasana azy dia nokasaina tamin'ny 19 septambra tany amin'ny firenena 150 mahery ary ny ambiny dia tantara. Tonga niaraka tamin'ny famelabelarana izy Bombo sy platillo, miaraka amina volana fitsapana ho an'ny mpampiasa rehetra ary fiaraha-miasa roa miaraka amin'i Konami tahaka ilay tanàna angano Frogger Toy Town. Na izany aza, toa tao anaty rano borage daholo ny zava-drehetra.
Ny vaovao momba ny Apple Arcade tamin'ny taona 2021 dia saika tsy misy intsony, indraindray dia manambara katalaogim-panafahana vaovao izay efa tsy manana indéks exclusivity manintona ary toa mitovy ihany. Ireo mpamorona lalao video lehibe dia nijanona lavitra ny Apple Arcade, nanapa-kevitra ny hifidy amin'ny fivarotana fampiharana nentim-paharazana izay mety hahazoany vola miditra bebe kokoa amin'ny atiny. Ka hatramin'ny roa volana dia tsy nisy anaram-boninahitra vaovao na iray aza tao amin'ny Apple Arcade, Azonao an-tsaina ve ireo rakotra haino aman-jery nomerika raha toa ka nataon'i Netflix na HBO izany?
Tsy nanana fitarainana marina mihitsy
Tsy hoe ny tontolon'ny lalao video dia nanjary tena marimarina nanomboka tamin'izay, nisy fahombiazana marobe tao amin'ny App Store toa ny Call of Duty Mobile na Geshin Impact. Ny zava-misy dia toa nesorina tamin'ny lalao kely mahazatra ny Apple Arcade. Ary io ilay anaram-bosotra Arcade dia toa nisondrotra tamin'ny fomba ambony indrindra, na izany aza, Tsy manolotra mahasarika azy ireo izy ireo ary mety hiafara amin'ny fandaniana bebe kokoa amin'ny famandrihana isam-bolana noho ny hampiasanao vola amin'ny lalao video an'io fomba io amin'ny findainao.
Apple dia tsy afaka nilalao ny tetika lehibe nataon'ny Apple TV, amin'ny fomba mitovy amin'ireo lalao ireo izay lavitra ny fahafahany mametraka ny GPU an'ny fitaovana Apple toy ny iPad Pro na ny iPhone farany manohitra ny tady. Ny tena izy dia lalao video izy ireo izay mahalana no mametraka fanamby mampiala voly ary tsy mamirapiratra mazava eo amin'ny sehatra teknika koa, Inona no antso avo? Tsia, tsy misy tsotra izao. Raha ny marina dia miahiahy aho fa mpampiasa maro no nanapa-kevitra ny hanohy ny serivisy amam-bolana maromaro raha tsy hoe manana izany amin'ny famandrihana Apple One ianao.
Ny fananana lehibe an'ny Apple TV
Tsy manana console i Apple, ary niresaka taminao izahay taloha a fanangonana ireo tsy fahombiazan'ny Apple (izay azontsika ampidirina ao amin'ny Apple Arcade) de Pippin, ny console an'ny orinasa Cupertino. Tsy manome tsiny anao izahay raha tsy tadidinao izany, tsy misy mahatadidy izany. Raha ny marina, angamba izy io dia mety hametraka amin'ny fanamarihana an'i Tim Cook momba ny fahamendrehana hiditra amin'ny tsenambarotra toy ny lalao video. Apple Arcade no niharam-boina farany ary ny iray amin'ireo antony dia ny tsy fananany sehatra hampiroboroboana tanteraka ny lalao video.
Ny Apple TV dia mety ho sehatra mendrika, manana fahefana lehibe amin'ny lalao kausal izay hiarahana amin'ny fianakaviana na ho an'ireo ankizy kely ao an-trano aza. Andao hatrehana izany, ny Apple TV miaraka amin'ny teknolojia fanodinana an'i Apple dia tsy hamela na inona na inona irina amin'ny Nintendo Switch, manaporofo fa tsy ny zava-drehetra ny sary. Ho fanampin'izany, Apple koa dia nanambara tamim-pankasitrahana izaitsizy ny fifanarahana henjana an'ny Apple TV miaraka amin'ny fifehezana ny PlayStation 5, ny DualSense.
Ary na eo aza izany rehetra izany, ny Apple TV dia mbola tsy fitaovana mahasarika noho ny antony maro, raha tokony ho izy no fitaovana lehibe anaovan'ny Apple Arcade pivots rehetra. Na izany aza, Nifantoka tamin'ny sehatra finday i Apple, tsy te hahatsapa fa ny slot dia miasa tsara indrindra amin'ny finday. (tsy lalao video ny Candy Crush…).
Tsy misy andinin-tsoratra na lalao franchise
Raha mijery azy ianao, amin'ny farany dia hitantsika ny zavatra mahazatra ao amin'ny tabilao, ny Call of Duty hafahafa, ny Fortnite "vaovao", ny Mandoa vola toa ny FIFA 21 sns. Na izany aza, ao amin'ny Apple Arcade no hany nanokatra ny vavantsika kely dia ny kopia mora an'i Mario Kart miandraikitra ny hedgehog manga lehibe sy SEGA, orinasa mandà ny ho faty mandrakizay. Na dia maharary aza ny mahita an'i Sonic amin'ireo toe-javatra ireo, ny tena izy dia tsy dia milamina ny lalao video handoavana manodidina ny dimy euro isam-bolana.
Ary toy izao no tsy nahitan'i Apple, na teo aza izany rehetra izany, tamin'ny alàlan'ny franchise lehibe mba hanolorany atiny manintona ho an'ireo mpampiasa, manana Electronic Arts izahay izay mamadika ny zavatra rehetra kasainy ho volamena, Star franchise style Wars, fifandraisana manokana amin'ny Disney Pixar miaraka amin'izay asehony rehetra. Na izany aza, tsy misy tarehintsoratra karismatika na kintana marketing hita eo amin'ny fonon'ny Apple Arcade, amin'ity tranga ity, Inona no hisarika anao handoa ny serivisy?
Ireo no antony mahatonga ny Apple Arcade maratra mafy, tsy haiko raha ratsy kokoa ny manadino ny sasany fa misy izy io na maro hafa no mbola tsy naheno mivantana momba ny serivisy. Mandritra izany fotoana izany, hanohy hilalao ilay hafahafa isika Free-to-Play fitondran-tena mampiahiahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny fiakarana sy ny fianjeran'ny Apple Arcade, tantaran'ny tsy fahombiazana
Huguinho Rojas dia hoy izy:
Haha, inona ny haino aman-jery espaniola miaraka amin'i Apple? Izaho dia efa nahita toy ny lahatsoratra telo nisesy nanala baraka ary na dia mandainga aza toa ilay naoty avy amin'i El País izay milaza fa tsy azo sintomina ao amin'ny App Store intsony i Alto's Odyssey, izay lainga ratsy vava; ary eto izy ireo dia tsy nanonona intsony fa tamin'ny volana aprily dia nisy fanavaozana goavana ny serivisy izay misy lohateny avo lenta toy ny Fantasian na koa iray avy amin'ny Lalao Platinum. Mendrika ny kiana an'i Apple fa aza mitanila ary ambonin'izany rehetra izany, aza mandainga, ratsy tarehy sy maharikoriko izany. Tsy misy isalasalana fa ny orinasa iray izay manomboka amin'ny S dia nampiofana azy ireo tsara ka mitifitra hatraiza hatraiza nefa tsy mijery ny lazany.
Valiny tamin'i Huguinho Rojas
Nanamafy ny vanim-potoana faharoa tamin'ny andiany Apple TV + "La Costa de los Mosquitos"
Ny fampiharana Philips Hue dia mahazo ny fanavaozana lehibe indrindra amin'ny tantarany